Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii wada tashiga iyo wax qabadka halganka Ogaadeeniya
Shirkii wada tashiga iyo wax qabadka halganka Ogaadeeniya
Shir aad u balaadhan oo ay kasoo qayb galeen boqolaal dadwayne ah oo ka kalayimid xaafadaha magaalada Nairobi iyo Nawaaxigeeda ayaa galabta ka dhacay Hall wayn oo ku yaala badhtamaha xaafada ay soomaalidu ubadan tahay ee Eastleigh.
Shirkan ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay jaaliyada walaalaha aan nahay ee Soomaaliyeed, iyo shacab Kenyan ah.
Shirka galabata ka dhacay Nairobi oo loogu magacdaray “SHIRKII WADA TASHIGA IYO WAX QABADKA HALGANKA OGAADEENIYA” ayaa waxaa kasoo qayb galay masuulyiin kamid ah JWXO iyo kuwo Kenyan ah. Shirka oo ahaa shir siwayn loosoo agaasimay ayaa qaban qaabadiisu waxay kasocotay magaalada Nairobi todobaadadii ugu dambeeyey bishii November ee shalay inaga dhammaatay.
Masuulyiintii shirka ka hadlay ayaa waxaa kamid ahaa Mudane Maxamed Shariif Cumar, Mudane Badal Axmed Xasan, Mudane Cabdulaahi Maxamed Aadan (Xaliye) iyo masuuliyiin kale oo isugu jiray masuulyiin jaaliyadeed iyo kuwo kela.
Mudane Maxamed Shariif ayaa waxa uu ka hadlay kamid noqoshada ciidamada gumaysiga Ethiopia ay kamid noqdeen ciidamada Amisom waxa uuna masuulku sheegay in ciidamda ethiopia aysan marnaba daacad kanoqonayn arimaha soomaaliya isagoo intaasi ku daran in ethiopia ay waligeed ku taami jirtay sidii ay ummada soomaaliyeed uwada gumaysan layhady waxa uuna soo qaatay hadal aad u caan baxay oo uu yidhi KT bakhtiyey ee ethiopia Malez kaasi oo ahaa “Ethiopia madoonayso dowlada soomaaliyeed ee waxay doonaysaa dad soomaaliyeed” taaso oo uu ku macneeyey in ethiopia ay marwalba ku dadaalayso sidii ay dowlada ka dhalata soomaaliya uga raali noqonayn.
Masuuliyiintii shirka galabta kasoo qayb galay ayaa dhammaantood waxa ay kunuux nuux sadeen horumarka uu sameeyey halganka Ogaadeeniya iyagoo farta ku fiiqay niyad jabka gumaysiga iyo gancan yarayaashiisha iyo waliba halka uusii marayo qorshihii gumaysi ee ogaadeeniya oo ay kutilmaameen inuu maanta galay marxalada aad uliidata
Shirka ayaa waxa lagu soo ban dhigay suugaan halgameed aad uqiima badan oo ay kawada raali noqdeen dadwaynihii kasoo qayb galay shirka.
Shirka oo maqal iyo muuqaal ah kala soco Ilays TV.